सबैलाई स्वस्थ बनाउने अभियानमा हिँडेका कमलबहादुर
रमा लुइँटेल सोमबार, असोज ११, २०७८
कमल बहादुर राजलवट न वैद्य हुन् न त चिकित्सक नै । निशुल्क गुर्जो बाँड्ने उनी सरकारी कर्मचारी हुन् । राजश्व कार्यालय धुलिखेलमा कार्यरत उनी अहिले विशेष अभियानमा छन् —उनले थालेको त्यो अभियान हो निशुल्क गुर्जो वितरण । नेपालका कोरोना भाइरसको पहिलो लहर देखिनु अघिसम्म उनी गुर्जो औषधिको रुपमा प्रयोग गर्थे । रुघाखोकी लाग्दा गुर्जो खान्थे । त्यसरी गुर्जो खाँदा उनलाई नसोचेको शारीरिक तन्दुरुस्ती प्राप्त भयो । अघिल्लो वर्षदेखि उनी गुर्जो बेर्ना , गुर्जो चिया, गुर्जो सहित धुलो औषधि कोरोना भाइरस फैलन नदिन अघिल्लो वर्ष सरकारले गरेको लकडाउन पछि उनी गुर्जो बेर्ना, गुर्जो चिया, गुर्जो सहितको धुलो औषधी वितरक समेत भएका छन् । गुर्जोको बेर्ना, चिया र औषधी निशुल्क वितरण गर्न उनी कहिले प्रधानमन्त्री कार्यलय पुगे त कहिले सिंहदरबार । उपत्यकाभित्रका अधिकांश नगरपालिका, महानगरपालिका र गाउँपालिका पुगिसकेका छन् । पाशुपत क्षेत्र, बागमती नदी किनारा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्ता खुल्ला ठाउँमा गुर्जोको विरुवा रोप्न भ्याइसके । दिनभर कार्यालयमा व्यस्त हुने उनी बिहान र बेलुका गुर्जो रोप्न र विरुवा बाँड्न हिड्छन् । निषेधआज्ञा जारी हुन अघि उनी थरमसमा गुर्जो चिया बोकेर हिड्थे । सामाजिक काममा भेला भएकाहरुका चिया खुवाउँथे । महिमा बुझाउँथे ।
कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर नियन्त्रण भएपछि उनी आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता दिने बताउँछन् । केही महिना अघि धुलिखेल सरुवा भएका कमलबहादुर यसअघि लाहानस्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा थिए । उनको कार्यालय वरिपरि गुर्जोको लहरा जताततै फैलिएको थियो । बिहान, बेलुकाको समय सदुपयोग गर्दै गुर्जोको कलमी काटे । उनको यो कामलाई उनले परिवार र आफन्तले सहयोग गरे । कलमी काट्ने काम निषेधआज्ञाका कारण अहिले स्थगित छ । हालसम्म एकलाख पचास हजार भन्दा बढी विरुवा निशुल्क बितरण गरेका छन् । दुईलाख भन्दा धेरैले निशुल्क गुर्जो चिया सेवन गराई सकेका छन् । .उनी भन्छन् ‘जति वितरण गर्न पायो, त्यति खुशी हुन्छु ’ यो कामलाई उनी व्यक्तिलाई निरोगी बनाउने अभियान भन्छन् । आन्तरिक राजश्व कार्यालय धुलिखेल जाने जो कोही सेवाग्राही गुर्जो चिया खान्छन् । ‘ अतिथिलाई स्वागत पनि गरेका हौं, गुर्जोको बारेमा प्रचारप्रसार पपनि भयो कार्यालयमा गुर्जो चिया थर्मसमा राखिएको हुन्छ । कार्यालयमा आउनेहरु गुर्जोको महत्व बुझ्छन् । चिया खान्छन् । आफ्नो काम तर्फ लाग्छन् । कार्यलयमा आउने सेवाग्राहीले कर कार्यालयमा गुर्जो चियाको निशुल्क व्यवस्था हुँदा अचम्म मान्ने गरेका छन् । सरकारी कार्यालयमा जानेहरु प्राय: निराश हुँदै यो भएन, त्यो भएन भन्दै फर्कन बाध्य हुन्छन् । यो अवस्थालाई थोरै भएपनि धुलिखेल कर कार्यालयले तोडेको छ ।
कमलबहादुर भन्छन्, ‘यसले गुर्जो मार्फत निरोगी बनाउने अभियानसँगसँगै सरकारी कार्यालयप्रतिको सकारात्मक बन्न सहयोग गर्छ । ’ जन्म र मृत्यु । यी दुई सृष्टिका प्रक्रिया हुन् । बाँच्ने क्रममा मान्छेले धेरै काम ष्र्छ ।। ती मध्ये कति अरुको हितको लागि गर्छ ? यो प्रश्नमा कलम बहादुर केही समय घोत्लिए । त्यसरी घोत्लिदाँ उनले गुर्जोलाई माध्यम बनाउने निधो गरे । समाज र राष्ट्रप्रतिको कर्तव्यबोधका कारण कार्यालय समय बाहेकको समय अरुलाई निरोगी बनाउने अभियानका लागि खर्चिर्ने निर्णय गरे । जुन निर्णयले उनलाई यस्तो आनन्द दिएको छ कि, त्यसलाई उनी शब्दमा व्याख्या गर्न सक्दैनन् । जहाँ इच्छा ,त्यहाँ उपाय भने झैं उनको यो अभियानलाई समयले साथ दियो । भन्छन् , ‘चाहना भयो भने ,नहुने कुरा के रहेछ र ?’ खेर गएको समय मान्छेलाई निरोगी बनाउने अभियानमा खर्चिएका छन् । गुर्जोको कलमी काट्ने, विरुवा उत्पादन गर्ने, वितरण गर्ने, गुर्जोको महिमा बुझाउने , फाइदा बताउने काममा उनी व्यस्त छन् । कलमी काट्दा बचेका डाँठ, पातलाई पिधेँर धुलो बनाउने व्यवस्था समेत गरेका छन् । यो धुलोमा तुलसी, असुरो र अन्य थुप्रै प्रकारका जडिबुटीहरु मिसाउँछन् र बनाउँछन् गुर्जो चिया । यी जडिबुटी खरिद गर्न लाग्ने खर्चको सम्बन्धमा उनी कमाईको थोरै खर्च नेपालीलाई स्वस्थ बनाउने अभियानका लागि खर्चिएको बताउँछन् । यसरी निशुल्क वितरण कहिलेसम्म गर्न सक्लान् ? गुर्जो निशुल्क वितरण कहिलेसम्म गर्न सक्लान् ? त्यो विषयमा सोचेका छैनन् । शायद मस्तिष्कले मात्रै चाहेको भए, यो काममा चाँडै ब्रेक लाग्थ्यो होला । हृदयदेखि नै चाहेकाले यो काम संभव भयो । र, निरन्तर चलिरहेको छ । भन्छन् , ‘ मन र मस्तिष्कको भिन्नता शायद यही होला । ’ महोत्तरी जिल्लामा जमिएका उनले २०५६ देखि सरकारी जागिर सुरु गरे ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयमा सुब्बा थिए उनी काम शुरु गर्दा । २०५९ सालमा प्रशासन तर्फ अधिकृतमा नाम निकाले । २०६७ सालमा राजश्व तर्फ उपसचिवमा नाम निकाले । सकारात्मक सोच नै सफल जीवनको आधार भएको बताउँछन् । गुणकारी गुर्जो आयुर्वेदका ज्ञाता, आयुर्वेदको अध्ययन अनुसन्धानकर्ता गुर्जोको प्रयोगले मान्छेमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ । । गुर्जोमा रोेगसँग लड्ने क्षमता हुन्छ । नेपालमा पाइने महत्वपूर्ण जडीबुटी मध्ये गुर्जो एक हो । औषधीय गुणले भरिपूर्ण यो लहरा नेपालको ग्रामीण भेगमा सर्वसुलभ रुपमा पाइन्छ । ज्वरो, रुघाखोकी , बाथलाई गुर्जो अचूक औषधिको रुपमा लिइन्छ । गुर्जोले इन्सुलिन बढाउन सघाउने भएकाले मधुमेहका रोगीहरुलाई यो निकै उपयोगी मानिन्छ । यतिबेला गुर्जोको चर्चा व्यापक छ । त्यसको कारण हो, कोरोनासँग लड्न एन्टीबडी बलियो हुनुपर्छ । एन्टिबडी बलियो बनाउने काम गुर्जोले गर्छ । गुर्जो हुर्काउने तरीका बारे कमलबहादुर भन्छन्, यहाँहरुले यसलाई गमलामा पनि रोप्न सक्नुहुन्छ ।’ यो विरुवा जस्तोसुकै वातावरणमा पनि हुर्कन सक्ने उनले बताए ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज ११, २०७८, १५:५१:००